Sandals Resorts: Chinja Kuchinja-chinja Pasina Zvirango
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Resorts » Sandals Resorts: Chinja Kuchinja-chinja Pasina Zvirango
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts Inopa Kunonyanyisa Kuchinja Kuchinjika neNe Zvirango
Shangu shanu-nyeredzi dzemhando yepamusoro dzaisanganisira nzvimbo dzekugara iri kubvumidza izere zita shanduko pasina zvirango zvemusi wekutanga uye nzvimbo yekutenderera nekuda kwedambudziko rekufamba rinokwira kubva kuCOVID-19 coronavirus. Izvi zvinoreva kuti vashanyi vanogona kushandura ese mazita ari kubhuka nemazita matsva pasina zvirango. Ndokumbira utarise kune zveAirline Carriers marongero ekuchinja kwendege / kukanzura sezvo izvi zvichisiyana.
Kubhuka kuri kufamba mukati meiyo tafura yemazuva kuchabvumidzwa kudzosera rwendo kusvika kumwedzi gumi nembiri kubva pamazuva ekutanga ekufamba. Shangu dzinochengetedza chiyero chepakutanga muchikamu chimwe chete uye panzvimbo imwechete yekutandarira. Krisimasi neGore Idzva misi yakasviba-inoshanda.
Yakasimbiswa prizewinner bookings inofamba mukati meiyo nguva yakatarwa inogona kudzokorora kuti ifambe mukati memwedzi mitanhatu kubva pamazuva ekutanga ekufamba, zvichibva mukuwanika.
Prizewinner zvitupa izvo zvisina kuregererwa uye zviri kupera muna Kubvumbi 30, 2020, zvinogona kuwedzerwa kwekufamba kwemamwe mwedzi mitanhatu kubva pazuva rekupera.
SANDALS ZVINOGONESESWA ZVAKACHENA ZVEMAZWI
Sandals inoitisa chaiyo-nguva yekutarisa kweazvino matsva kubva kuWHO, CDC, hurumende dzematunhu, uye nezviremera zvehutano zvemunharaunda kuti vaone kuti iine ruzivo rwechizvino-zvino uye inoteedzera ese akakurudzirwa nhungamiro.
Yakagadziridzwa kudzidziswa uye dzidzo kune vashandi vayo iri kuenderera mberi kuona kubudirira kuita kweemaitiro pazvivakwa uye zvakare mukati mevashandi misha yavo pachavo nenharaunda.
Mahotera ari kutaurirana pachena kune-vepfuma vashanyi tsika dzakarumbidzwa dzehutsanana kuitira kuti vabatanidze mune ino inokosha yekuedza.
Sandals iri kuongorora ayo ese ekuchenesa maprotocol uye ichiwedzera kuwanda kwenzvimbo dzekuchenesa nzvimbo dzese dzakakwirira-nzvimbo dzekutandarira dzinosanganisira maresitorendi, mabhawa, nzvimbo dzekuvaraidza, uye makamuri evaenzi ane katatu-cheki sisitimu yekuona kuti aya matanho akasimba anoitwa.
Mahotera ari kupa mamwe masipo ekugezesa uye gels mudzimba dzese dzevaenzi, dzimba dzekugezera, uye dzimwe nzvimbo dzakatenderedza zvivakwa.
Pane-saiti yekutanga-yekubatsira vanamukoti uye 24/7 pa-kufona vashandi vekurapa vakagadzirira kutsigira vese vashanyi.
Boka revashanyi riri kubvunza zvikwata zvekurapa zvine mukurumbira pasi rese kuti vaone kuti iine mafambisirwo nemaitirwo azvino panzvimbo yekutandarira.
Sandals neBeach Resorts zvinoramba zviri pakati penzvimbo dzakachengeteka uye dzinonakidza kwazvo dzepasirese kushanyira izvozvi.